Maitiro ekuona iyo bhatiri muzana pane iyo iPhone X | IPhone nhau
Maitiro ekuona iyo bhatiri muzana pane iyo iPhone X
Iyo "notch" yeiyo nyowani iPhone X hapana mubvunzo chimwe chinhu chisingakwanise kudzivirirwa sezvo ichigadzira kamera mbiri kamera nema sensors, ichi chinhu icho pasina mubvunzo chinogumira kuratidzwa kwemifananidzo iyo yatinayo kumusoro kwechiso uye mune iyo kesi yebhatiri iro riri kurudyi rinotibvumira ona chete icon ye «iyo stack» isina muzana muhuwandu.
Saka isu tiri kutarisa nzira dzatinofanira kuona nhamba iyi uye iyo chete iripo haina kujairika muiyo iPhone. Uye ndizvo izvo kazhinji sarudzo iyo yatinoshanda iye zvino mumaPhones ese kusara kwegumi yegumi yemuenzaniso ndeye kuwana Zvirongwa> Bhatiri uye shandisa bhatiri muzana, iyo nhamba inowanikwa pachiratidziri uye ndizvozvo. Muchiitiko cheiyo iPhone X izvi hazvigoneke nekuda kwenzvimbo shoma, asi isu tinogona kuona nhamba iyi nekukurumidza uye nyore.
Maitiro ekuona iyi bhatiri muzana pane iyo iPhone X
Zvakanaka, kuona bhatiri muzana mune idzi nyowani iPhone X zviri nyore sekuwana kubva kuControl Center. Zvazviri isu tinongofanirwa kutsvaira pasi kubva kukona yepamusoro yekurudyi yeiyo skrini iri pamusoro peiyo bhatiri icon uye chaiyo muzana yebhatiri rasara ichaonekwa muzvimiro. Isu hatidi kuita chinhu chero chipi zvacho, kungori kubva kuControl Center.
Izvi ndizvozvo uye zvinoita sekunge zvichachinja munguva pfupi iri kutevera, asi isu hatisi kutonga kuti Apple ichawedzera kana kufunga kuwedzera zvakananga mukana we chinja bhatani icon kune iyo muzana icon. Zvichida nekutyorwa kwejeri izvi zvinogona kuitika, asi musimboti takarasa izvo zvakatipa makore mazhinji apfuura.
Icho chikonzero nei isu tisina sarudzo yekuwedzera ese mairi icon panguva imwechete iri pachena: kushayikwa kwenzvimbo yemuviri. Uye ndezvekuti skrini yeiyo nyowani Apple mureza ane iyi tebhu inonzi notch iyo inodzivirira kuwedzera iwo ma icon senge mune iPhone 8, 7, nezvimwe. Pese patinenge tichida kuona iyo muzana, isu tichafanirwa kupinda kuControl Center.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Maitiro ekuona iyo bhatiri muzana pane iyo iPhone X
Iyo iPhone X inowanikwa mune gumi nematanhatu nyika kutanga November 14
ICloud activation yakanganiswa pane iOS 11.1? Inoita kunge iri